လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ (၂၀၀၅) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်порно
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ (2005)
မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2005 Feb;4(1):31-44.
Bradley KC, Boulware ကို MB, Jiang H ကို, Doerge RW, Meisel RL, Mermelstein PG.
အာရုံကြောသိပ္ပံ, မင်နီဆိုတာ, Minneapolis တက္ကသိုလ်ဌာန, MN 55455, USA ။
ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများကဲ့သို့လိင်အတွေ့အကြုံကိုသည်, နျူကလိယ accumbens အတွက်ထိခိုက်စေ dorsal striatum အပါအဝင်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်။ ပိုကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါ neuroadaptations အခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, ငါတို့ differential နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် dorsal striatum အတွင်းလိင်ကြုံတွေ့နှင့်လိင်နုံအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမျိုးဗီဇကိုဖေါ်ထုတ်ရန် DNA ကို microarray ချဉ်းကပ်အလုပ်။6ပတ်, တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအထီးဟော်မုန်းရစေတယ်, ovariectomized အမျိုးသမီးဟမ်းစတားတဦး-ဝက်၏အိမျလှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ သတ္တမရက်သတ္တပတ်တွင်, နှစ်ခုစမ်းသပ်အုပ်စုများတစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအထီးနှင့်အတူတွဲတဦးတည်းတစ်ဝက်နှင့်အတူ, ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, တပတ်7အပေါ်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအထီးကိုလက်ခံရရှိလိင်ကြုံတွေ့ဟမ်းစတားမျိုးဗီဇ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တိုးပြ. ပြောင်းပြန်ရက်သတ္တပတ်7အပေါ်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအထီးမခံမလိင်ကြုံတွေ့အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအများအပြားမျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်လျှော့ချရေးပြ.
directional အပြောင်းအလဲများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေများအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏အမျိုးအစားအဘို့, ဒေတာအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum ဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ သို့သော်စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများပြသီးခြားမျိုးဗီဇလူထုကိုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှပထမဦးဆုံးအကြား, အလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါး mesolimbic နှင့် nigrostriatal dopamine လမ်းကြောင်းအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။